Makedoniana ‘Mamihina’ Toeram-Piantsenana Ao Skopje Hiarovana Azy Amin’ny Fironana ho Amin’ny “Baroque” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2014 15:01 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, čeština , Español, polski, македонски, English
Olona mifandray tànana, manao tohivakan'olombelona mba “hanafàna” ilay toeram-pivarotana ho an'ny daholobe ao Skopje, Makedonia. Sary nalain'i Vanco Dzambaski, CC BY-NC-SA
Ny alin'ny 29 Desambra 2014 teo, nisedra ranomandry sy lagilasy ireo olompirenena Makedoniana mba hanoherana ny drafitry ny governemanta hanolo ilay Toeram-piantsenana maoderina ao an-tanàna, naorina tamin'ny 1973 ary fantatry ny Makedoniana amin'ny fanafohezanteny hoe GTC, aminà iray hafa manana endrika “baroque”. Ireo mpikatroka mafàna fo sy mpanakanto ary mpahay maritrano no nitarika ny hetsika “Tiako ny GTC” (FB, TW, #ГоСакамГТЦ), izay fanindroany izao no nikarakara “fifamihinana” ho an'ny daholobe tao amin'ilay toerana.
Ampahany amin'ireo andiany nanomboka tamin'ny 2013 ity hetsi-panoherana ity, izay niezahana nanakànana io tetikasa Skopje 2014 manana endrika mandady amin'ny tany io, drafitra iray mahabe resaka sy mandany vola, hanomezana endrika indray ireo tranobe ao an-tanàna mba hanana endrika “neoclassique” na “baroque”. Misokatra ny GTC, toerana ho an'ny “daholobe”, ny fanjakàna no tompony (97% amin'ny renivola).
Nandrakitra ny zava-nitranga i Vancho Dzhambaski, mpikatroka amin'ny alàlan'ny fakàna sary, ary nanoratra hoe :
Na teo aza ny ranomandry nandrakotra ny arabe sy ny toetrandro tsy nahafaly loatra, nifamory marobe indray ireo olompirenena tao Skopje, tamin'ity indray mitoraka ity mba hanafàna ilay GTC mamin-dry zareo.
Olona maherin'ny 2.000 no nanandrana nandefa hafatra iray hafa ho an'ireo manampahefana be hambom-po izay tsy azonao ametahana ny dindo Espaniôla na ny endrika baroque eny amin'izay rehetra mahamety anao. Tsotra fotsiny, tsy izay rehetra hevitra fakàna tàhaka azo tamin'ny dia natao tany ivelany akory dia ho azo ampiharina eto. Na dia ao anaty tanàna iray efa miendrika toy ny Disneyland aza.
Novinavinain'ilay vavahadin-tserasera tsy miankina “A1on” ho maherin'ny arivo ny isa, ary navoakany ny lahatsarin'ilay hetsi-panoherana feno asa famoronana, lahatsary iray nozaraina betsaka tokoa.